आँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित] – Sandesh Munch
June 11, 2020 1517
यसै बीच उदिपको पुर्व प्रेमिका भनिएकी फिलिपिनी युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । प्रेमिकाको मात्र हैन तस्विरमा एउटा शिशु पनि देखिन्छ । तर ति शिशु उदिप र उनको प्रेमिका कै हो वा अन्य कसैको हो भन्ने भने स्पष्ट छैन । जुन शिशुसंग उदिप पनि संगै छन । तस्विर कहा कसले सार्बजनिक गर्यो त्यो भने खुलेको छैन । तर रिलेसनसिपमा मात्र रहेको बताउने उदिपलाई यो तस्विरले फेरी टाउको दुखाएको छ । पोखराबाट सञ्चालित समाचारपाटी डक कमले यो तस्विर सार्बजनिक गरेको हो ।[भिडियोसहित]
Prevएक्कासी किन हास्यो कहिलै नहास्ने कालभैरवको मूर्ति ? के हुन्छ अब ?
Nextखप्तड त्रिवेणी देख्ने बितिकै भेटी सोरुप एक-एक शेयर गर्दै भोलीको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। जय माता
घरबेटीको कुटाइबाट डेरावालको मृ त्यु
‘ कुनै पनि पण्डितले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गएर प्रतिवाद गर्न सक्दैन